Ungaxhuma kanjani kwiWindows PC ene-desktop ekude kusuka ku-Mac | Ngivela kwa-mac
UFrancisco Fernandez | | Mac App Store, Izifundiswa
Uma unekhompyutha ene-Windows operating system futhi umsebenzi wedeskithophu ekude usebenza, kungenzeka ukuthi wake wazibuza ukuthi ngabe ikhona yini indlela yokufinyelela leyo khompyutha kwi-Mac, ngoba ngezikhathi ezithile Kungasiza ukuthi ungasebenzi kwi-PC ngesoftware yomuntu wesithathu, futhi ukwazi ukwenza ukuxhumana ngokuqondile kusuka ku-Mac, njengoba nje kungenziwa kusuka kwenye ikhompyutha ye-Windows.
Kulokhu, yize kungelula kangako ngoba iMacOS ayinayo ithuluzi eliza lifakwe kuqala futhi elikuvumela ukuthi wenze lokhu ikakhulukazi, iqiniso ukuthi liyakwenza ungenza ukuxhumana kwedeskithophu ekude kusuka kunoma iyiphi i-Mac, futhi kulokhu uzodinga ukufaka uhlelo kuphela.
Xhuma kumakhompyutha wakho we-Windows kusuka ku-Mac nge-Microsoft Remote Desktop
Njengoba sishilo, kulokhu kusuka kuMicrosoft abakakwenzanga kwaba nzima kulabo basebenzisi abafisa ukusebenzisa ideskithophu ekude kusuka ku-Mac, ngoba bayenzele uhlelo lwayo, okulula futhi ukuyisebenzisa futhi mahhala, yize kulokhu kunenkinga encane, futhi lokho itholakala kuphela ngesiNgisi.
Noma iyiphi indlela, ukuxhuma kwikhompyutha yakho ye-Windows kusuka ku-Mac, into yokuqala oyodinga yile elandelayo:
I-Windows PC (okungcono iWindows 10 ukusebenza kangcono), elungiselelwe ukuvumela ukuxhumana okukude kusuka kwamanye amakhompyutha.
I-IP yemishini ethe izokwazi ukuxhuma.
Umsebenzisi nephasiwedi yakhe ehambisanayo ofuna ukufinyelela kuyo ngqo.
Uhlelo lokusebenza lweMicrosoft Remote Desktop ku-Mac yakho.
Lapho usutholile lokhu waqopha kahle, uzobe usulungele ukuxhuma okokuqala kukhompyutha yakho ukude, okufanele ulandele nje izinyathelo ezilandelayo:
Vula uhlelo lokusebenza lwe-Remote Desktop kusuka ku-Mac yakho bese uqhafaza kufayela le- engeza isithonjana, bese ukhetha "Ideskithophu" (noma "Ideski" ngeSpanishi). Uma kwenzeka iwizadi ivele ngokuzenzekelayo, awudingi ukwenza lokhu, vele uqhubeke ukuyilungisa.
Ensimini ebizwa "Igama le-PC", faka ikheli Ikhompyutha ye-IP IP embuzweni ofuna ukuxhumeka kuwo, noma igama lomsingathi uma kwenzeka unamakhompyutha womabili ekuxhumekeni kwenethiwekhi okufanayo.
Uma lokhu sekwenziwe, emkhakheni we "I-Akhawunti Yomsebenzisi", unezinketho ezimbili ongakhetha kuzo, kuya ngalokho okuthandayo wena:
Yishiye ithi "Ngibuze njalo", ukuze ngaso sonke isikhathi lapho ufuna ukungena kukhompyutha futhi, kuzofanele ufake ngesandla igama lekhompyutha kanye ne-password yalo, engaba wusizo uma unabasebenzisi abaningi abadalwe kwiWindows PC, futhi ufuna xhuma isikhathi ngasinye kwesinye sazo esihlukile.
Setha i-akhawunti yomsebenzisi, lapho ungagcina khona umsebenzisi oyedwa noma abaningi ukufinyelela kumakhompyutha akho ngendlela esheshayo, ngoba awudingi ukufaka igama lomsebenzisi noma iphasiwedi. Uma unesithakazelo kulokhu, kufanele ukhethe inketho ethi "Faka i-Akhawunti Yomsebenzisi ...", bese ufaka igama lomsebenzisi, iphasiwedi negama elijwayelekile ozolisebenzisa uma ufisa.
Ngemuva kwalokhu, kufanele nje chofoza inkinobho ethi "Gcina" (noma "Gcina" ngeSpanishi), futhi uhlu luzovela ngokuzenzakalela ngamadivayisi ahlukene owalondolozile ukuwaxhuma.
Kumele uchofoze kuleyo oyilungisile, futhi ngemizuzwana nje konke kuzolungiswa futhi ungayifinyelela ngaphandle kwenkinga, futhi uma yonke into isebenza kahle, yisebenzise sengathi ikhompyutha ye-Windows uqobo, ngaphakathi kwewindi kuphela.
Uma usukwenzile lokhu, kuya ngohlobo lweWindows ozifakile kukhompyutha oxhunywe kuyo, ungalungisa uhide lwamapharamitha kusuka ekucushweni.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Apple » Izifundiswa » Ideskithophu ekude ixhuma kanjani kwikhompyutha ye-Windows kusuka kwi-Mac
UFrancisco Jose kusho
Lokhu kusebenza kahle, kepha angikaze ngithole ukuthi ukuphrinta kusebenze kahle.
Phendula uFrancisco José
Kuyathakazelisa impela. Ngokwalokho engikubonile, ikhebula kimi alinankinga, kepha uma uphrinta usebenzisa i-Wi-Fi kwi-PC ukuxhuma kuphrinta, kubonakala ngathi kunezinkinga ... Nokho, ngicabanga ukuthi kuzoba nokuthile okuzokwenza ngalokho isignali yedeskithophu ekude ithunyelwa endaweni efanayo, kepha hheyi, ngithi ezinhlotsheni ezizayo zohlelo lokusebenza noma iWindows isixazululo sizofika
Isebenza kahle kepha angikwazi ukuphrinta ngisebenzisa iphrinta enentambo noma i-wifi, ???
Angilutholi uhlu lwezindawo zokusebenza, ngakho-ke angikwazi ukuthola imac yami engizoyikhetha.
NGIYABONGA KAKHULU NGOSIZO LWAKHO, NGIYABONGA KUSHICILELA KWAKHO NGIKWENZILE EMIZUZWINI EYI-10. NGIYABONGA
Sawubona, ngilandela izinyathelo, kepha lapho ngithola igama lomsebenzisi nephasiwedi kungitshela ukuthi akulungile futhi angikwazi ukuxhuma ehhovisi lami le-pc.
URafa Palacios kusho
Ntambama futhi ngiyabonga kakhulu ngale ndatshana:
Ngine-mac book pro yakudala, lapho engingakwazi ukufaka khona i-El Capitan OS (10.11) yakamuva futhi ngakho-ke i-Apple Store ngeke ingivumele ngithole futhi ngifake i-Remote Desktop (v. 10.3) engizama ukuyilanda inguqulo yangaphambilini yohlelo esishiwoyo (i-Remote Desktop 8.0.44) kepha angikwazi ukuyithola.
Uma ungangisiza kungaba kuhle.
Phendula uRafa Palacios
Sawubona! Nginenkinga efanayo nekaRafa, ngidinga inguqulo endala yedeskithophu ekude.
Kuhle, kimi akusebenzi kimi ngoba lapho uzama ukukuxhuma kunginikeza ikhodi yephutha engu-0x204. Akubuzi ngisho negama lomsebenzisi nephasiwedi yekhompyutha yendawo oya kuyo.
Uyazi ukuthi yini engenzeka?
Inkinga efanayo noMar, uyazi ukuthi kukhona yini isixazululo?
Kuhle into efanayo iyenzeka kimi kimi ayisebenzi kimi ngoba lapho izama ukuyixhuma inginika ikhodi yephutha engu-0x204. Ayibuzi ngisho negama lomsebenzisi nephasiwedi yekhompyutha eqondisiwe.
Sawubona! Nginenkinga elandelayo, uma ngisebenzisa iMicrosoft Remote Desktop kusuka ku-MAC yami ngokuxhumeka kwami ​​kwe-WIFI yasekhaya, ayisebenzi.
Manje, uma ngiyisebenzisa nge-inthanethi enikezwe umakhalekhukhwini wami, ixhuma ngaphandle komthungo kwikhompyutha yami yedeskithophu.
Uyazi ukuthi inkinga ingaba yini?
Ungazikhetha kanjani zonke izinto kufolda eku-Mac ngenhlanganisela elula yokhiye
Ngabe sizobona amamodeli we-Mac ane-processor eyodwa kuphela etholakalayo?